ဒူဒူကြီး: ‘VFD - Variable frequency drive (၃)'
Doubly fed slip recovery system - အကြောင်းမစခင် slip အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပါဦးမယ်။ induction သို့မဟုတ် asynchronous AC motors တွေရဲ့ primary winding နဲ့ secondary winding ကြားမှာ၊ air gap ရှိနေပြီး၊ primary winding မှ electromagnetic energy ဟာ၊ secondary winding သို့ inductive coupling အနေနဲ့ ကူးပြောင်းပါတယ်။ three-phase induction motors တွေရဲ့ ပင်ကိုယ်မူလသဘာဝအရ stator မှ wound rotor သို့မဟုတ် short-circuited squirrel cage rotor သို့၊ inherently self - starting အနေနဲ့ energy transfer ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
Fig. three-phase power supply providesarotating magnetic field in an induction motor
induction နဲ့ synchronous motors တွေရဲ့ stator သို့ AC power supplied ပေးသွင်းလိုက်တဲ့အခါ၊ magnetic fields တွေဟာ AC oscillations အနေနဲ့ လည်ပတ်ပြီး၊ ထွက်ပေါါလာပါတယ်။ induction motor ရဲ့ rotor ဟာ stator field ထက်လျှော့နည်းပြီး၊ လည်ပတ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် induction motor တွေရဲ့ stator မှ magnetic field ဟာ rotor ရဲ့လည်ပတ်မှု rotating အပေါါမူတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ synchronous motor တွေမှာတော့ rotor ဟာ stator field နဲ့ညီမျှစွာ လိုက်ပါလည်ပတ်ပါတယ်။ induction motor ရဲ့ stator မှထွက်ပေါါလာတဲ့ magnetic field ဟာ rotor မှာ၊ ဆန့်ကျင်ဖက် induced opposing current အဖြစ် သက်ရောက်ပါတယ်။
induced opposing current ကြောင့် short-circuited သို့မဟုတ် external impedance အနေနဲ့ secondary winding တခုကို ပေါါပေါက်လာစေပြီး၊ 'rotating magnetic flux induces currents' လို့ခေါါပါတယ်။ rotating magnetic flux induces currents ကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ magnetic field ဟာ၊ stator ရဲ့ magnetic field ကိုဆန့်ကျင်ပြီး ဖြစ်ပေါါလာတဲ့အတွက်၊ motor စတင်လည်ပတ်စဉ်မှာ၊ မူလသတ်မှတ်ထားတဲ့ လည်ပတ်မှုလားရာ direction of rotation အား၊ ဆန့်ကျင်မယ့်၊ လည်ပတ်မှုတခု ရှိလာပါတယ်။
Fig. speed - torque curves for four induction motor types: (A) Single - phase, (B) Polyphase cage, (C) Polyphase cage deep bar and (D) Polyphase double cage
induced rotor current ရဲ့ magnitude နဲ့ applied load ရဲ့ torque တို့ balances အနေနဲ့ ညီမျှသွားမှ၊ rotor ဟာ accelerates အနေနဲ့ အရှိန်ရပြီး လည်ပတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ load ရဲ့ torque နဲ့ညီမျှသွားပြီး induced rotor current မရှိတော့တဲ့ အခြေအနေမှာ ရရှိလာတဲ့ လည်ပတ်မှုကို synchronous speed လို့ခေါါပါတယ်။ induction motor တွေဟာ၊ synchronous speed ရဲ့ အောက်မှာသာ စတင်လည်ပတ်ပါတယ်။ Design B - Polyphase cage induction motors တွေမှာ torque curve အရ actual နဲ့ synchronous speed တို့ကြားကွာခြားမှုဟာ 0.5 to 5% ပမာဏခန့် ရှိနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။
Fig. Synchronous speed
synchronous speed ဟာ stator's magnetic field ရဲ့ rotation rate ကို revolutions per minute ဆိုတဲ့ RPM unit ဖြင့်၊ တိုင်းတာဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ rotor ရဲ့ speed ဟာ synchronous speed ထက် ထပ်မံလျှော့ကျသွားတဲ့အခါ၊ stator's magnetic field ရဲ့ rotation rate ဟာ rotor မှာ ထက်မံ မြင့်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ stator windings မှာ inducing current ပိုမိုပေါါပေါက်လာပြီး၊ ရုန်းအား torque မြင့်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
synchronous speed နဲ့ operating speed တို့ရဲ့ ကွာဟမှုအချိုးကို 'slip' အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ stator's magnetic field ကြောင့်ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ synchronous speed ဟာ stator electrical speed ဖြစ်ပြီး၊ rotor shaft လည်ပတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ operating speed ကတော့ rotor mechanical speed ဖြစ်ပါတယ်။
doubly fed slip recovery system ဆိုတာကတော့ inverter ကိုအသုံးပြုပြီး၊ rectified slip power ကို၊ smoothing reactor မှတဆင့် AC supply network သို့ supply power ပေးသွင်းခြင်း တနည်းအားဖြင့် speed ကို adjusting current အသုံးပြုကာ၊ controlled လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ doubly fed electric machines တွေရဲ့ stator winding ကို၊ three - phase grid ဖြင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ထားပြီး၊ three - phase rotor winding ကိုတော့ rotating သို့မဟုတ် static frequency converter မှ၊ grid အနေနဲ့ ပေးသွင်းပါတယ်။ doubly fed electric machines ဆိုတာကတော့ stationary parts မှာသာမက၊ rotating parts မှာလည်း၊ windings တွေထည့်သွင်းထားပြီး၊ stationary နဲ့ rotating windings (၂) ခုကြားမှာ magnetic flux တွေ transfer လုပ်ရင်း ရရှိလာတဲ့ significant power ကို၊ shaft system သို့မဟုတ် electrical system အတွက် အသုံးပြုမယ့် motors နဲ့ generators တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
varying speed ဟာ limited range အတွင်းမှာသာ၊ synchronous speed အဖြစ်ရှိနေရန်၊ လိုအပ်မယ့် applications တွေမှာ doubly fed machines တွေတတ်ဆင်အသုံးပြုပါတယ်။ မူလက doubly fed machine တွေအဖြစ်၊ rotor နဲ့ stator မှာ multiphase winding sets တွေထည့်သွင်းထားတဲ့ 'wound rotor induction motors' တွေကို၊ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ wound rotor induction motors တွေရဲ့ rotor winding set ကို slip rings မှတဆင့် resistors တွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့အတွက်၊ motor စတင်လည်ပတ်မယ့် starting မှာ resistors ကြောင့် slip power ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။
SRIM လို့ခေါါတဲ့ slip ring induction motors တွေကို၊ variable speed operation အနေနဲ့ မောင်းနှင်တဲ့အခါ၊ slip power ကို recovering အနေနဲ့ပြန်လည်ရရှိလာပြီး၊ efficiency တက်လာနိုင်တဲ့အတွက်၊ 'Krämer' လို့ခေါါတဲ့ Kraemer drives တွေမှာ၊ rotor အား slip ring မှတဆင့် DC feed ပြန်လည်ပေးသွင်းတဲ့နည်းကို အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ slip power ဟာ mechanical power အနေနဲ့ ပြန်လည်ရရှိလာတာဖြစ်ပြီး၊ Krämer drive မှ excitation currents အနည်းအများကို၊ controlled အဖြစ်၊ လိုအပ်သလို ချိန်ညှိပေးပါတယ်။ Krämer drive တွေမှာ၊ drawback တွေဖြစ်ပေါါလေ့ရှိတဲ့အတွက်၊ extra circulating power ပေးသွင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်။
Fig. SRIM drive (a) Krämer drive and (b) Scherbius drive
Krämer drive မှာ extra circulating power အဖြစ် rotor supply ပေးသွင်းတဲ့အခါ၊ rotating machinery တွေရဲ့ အရွယ်အစားကြီးမားလာသလို၊ တည်ဆောက်မှု ကုန်ကျစားရိတ်လည်း မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်၊ 'Scherbius drive' တွေကို အစားထိုးသုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ်။ Scherbius drive တွေရဲ့ rotor ကို rectifier-inverter set နဲ့ဆက်သွယ်ပြီး၊ ပထမဆုံး အသုံးပြုခဲ့တဲ့ rectifier-inverter set ကတော့ mercury arc based devices ဆိုတဲ့ လေဟာမီးလုံး vacuum tube တွေဖြစ်ကာ၊ နောက်ပိုင်းမှာတော့ semiconductor diodes တွေနဲ့ thyristors တွေကို၊ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ Scherbius drive တွေမှာ uncontrolled rectifier တွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်၊ rotor အား လည်ပတ်မှုလားရာ direction of rotation တဖက်တည်းဖြင့်သာ၊ လည်ပတ်စေနိုင်ပြီး၊ sub - synchronous speed operation အနေနဲ့သာ အသုံးပြုနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။
Fig.3- phase cycloconverter
'CCV' ဆိုတဲ့ cycloconverter တွေကို၊ rotor နဲ့ AC grid ကြားမှာ တတ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ static frequency ကြောင့် rotor အား လည်ပတ်မှုလားရာ direction of rotation နှစ်ဖက်စလုံးဖြင့်၊ လည်ပတ်နိုင်ပြီး၊ sub-synchronous speed operation အနေနဲ့သာမက၊ over - synchronous speed operation အနေနဲ့ပါအသုံးပြုလာနိုင်ပါတယ်။
Load torque and power characteristics - VFD တွေကို အသုံးပြုတဲ့ control platforms တွေကတော့ PWM V/ Hz scalar control, vector control လို့ခေါါတဲ့ PWM field-oriented control နဲ့ DTC လို့ခေါါတဲ့ direct torque control တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ load torque and power characteristics အနေနဲ့ centrifugal fan, pump နဲ့ blower applications တွေဖြစ်တဲ့ variable torque, conveyor နဲ့ constant power constant power လိုအပ်တဲ့ machine tool and traction applications တွေမှာ၊ ခွဲခြား အသုံးပြုကြပါတယ်။
'vector control' လို့ခေါါတဲ့ PWM field - oriented control သို့မဟုတ် FOC ဟာ၊ controllable VFD inverter output (၂) ခုကို အသုံးပြုပြီး၊ AC synchronous နဲ့ induction motor တွေကို၊ control လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ vector control ဖြင့် AC synchronous နဲ့ induction motor တွေကို၊ control လုပ်ရာမှာ separately excited DC motor ကဲ့သို့ operating conditions အးလုံးအတွက်၊ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာကို၊ တွေ့ရပါတယ်။
respective field နဲ့ armature ဆိုတဲ့ torque component တွေကြောင့် field flux linkage နဲ့ armature flux linkage တို့ပေါါပေါက်လာပြီး၊ currents ဟာ orthogonally aligned အနေနဲ့ ထောင့်မှန်ကျစွာ right angles အဖြစ်စီးဆင်းပါတယ်။ torque ကို controlled လုပ်ရာမှာလည်း field flux linkage အပေါါ သက်ရောက်မှုမရှိသလို၊ dynamic torque response ရရှိနိုင်တာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ vector control ဟာ complex voltage vector မှတဆင့် three - phase PWM motor voltage output ကိုထုတ်ယူပြီး၊ three-phase motor stator current input မှ ထွက်လာတဲ့ complex current vector ကို၊ 'reference frame two - coordinate time invariant system' ဖြင့် controlled လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Fig. ( d, q ) Coordinate System Superimposed on Three-Phase Induction Motor
complex stator motor current space vector ကို၊ 'a ( d, q ) coordinate system' ဖြင့်ဖော်ပြနိုင်ပြီး၊ orthogonal components တွေဖြစ်တဲ့ 'd (direct)' နဲ့ 'q (quadrature) axes' တို့ဟာ၊ ထောင့်မှန်ကျစွာတည်ရှိနေတာကို၊ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် field flux linkage component ရဲ့ current ဟာ 'd axis' အပေါါမှာ aligned along အနေနဲ့ရှိနေပြီး၊ torque component ရဲ့ current ကတော့ 'q axis' အပေါါမှာ aligned along အနေနဲ့ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
induction motor's (d,q) coordinate system ကို motor's instantaneous (a,b,c) three-phase sinusoidal system အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီး၊ current vector တွေဖြစ်တဲ့ 'd' နဲ့ 'q' ဟာ၊ proportional and integral တနည်းအားဖြင့် PI control ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ three - phase PWM motor voltage output မှရရှိလာတဲ့ complex voltage vector ကို၊ three-phase motor stator current input မှ ထွက်လာတဲ့ complex current vector သို့ projections သို့မဟုတ် rotations back အနေနဲ့ ပေးသွင်းရာမှာ၊ forward projection, forward three to two - phase projection နဲ့ forward and backward two to two phase projection အစရှိတဲ့နည်းလမ်းများဖြင့်၊ ပေးသွင်းပါတယ်။
Fig. Space - vector modulation motor controllers / PWM modulators
forward projection ဟာ instantaneous currents ကို (a,b,c) complex stator current space vector သို့ပြောင်းလဲကာ three-phase sinusoidal system အဖြစ်ပေးသွင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ forward three to two phase ဆိုတဲ့ (a,b,c) to (α, β) projection မှာ 'Clarke transformation' နည်းလမ်းကို၊ အသုံးပြုပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် motor ရဲ့ ညီမျှနေတဲ့ balanced three-phase currents မှ၊ phase (၂) ခုကို sensed လုပ်ကာ၊ vector control implementations အဖြစ် အသုံးပြုပြီးပေးသွင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် motor ကို backward (a,b,c) to (α, β) projection အနေနဲ့ပြောင်းပြန်လည်စေရန်၊ space vector PWM modulator အဖြစ် Clarke transformation နဲ့ PWM modulators တို့ကို တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Forward and backward two to two phase ဆိုတဲ့ (α, β) to (d,q) and (d,q) to (α, β) projections မှာတော့ Park and inverse Park transformations တို့ကို အသုံးပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် three to two ဆိုတဲ့ (a,b,c) to (d,q) projection နဲ့ inverse projections အနေနဲ့ complex current vector ပေးသွင်းနိုင်ခြင်း မရှိတာကိုလည်း၊ တွေ့ရပါတယ်။
(d,q) coordinate system ရဲ့ rotation ကို preferred speeds သို့မဟုတ် reference frames အနေနဲ့ stationary reference frame, synchronously rotating reference frame နဲ့ rotor reference frame ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ (d,q) coordinate system ဟာ stationary reference frame မှာ လည်ပတ်မှုမရှိပဲ၊ synchronously rotating reference frame မှာတော့ synchronous speed ဖြင့်လည်ပတ်ကာ၊ rotor reference frame မှာ rotor speed ဖြင့်လည်ပတ်စေပါတယ်။
Fig. (a) Simplified Indirect FOC Block Diagram and (b) Simplified Direct FOC Block Diagram
direct feedback vector control (DFOC) နဲ့ indirect feedforward vector control (IFOC) ဆိုပြီး၊ vector control methods နည်းလမ်း (၂) ခုရှိတဲ့အနက်၊ closed-loop mode ဖြစ်တဲ့ IFOC ကို၊ အသုံးများပါတယ်။ IFOC တွေမှာ stator currents နဲ့ rotor speed တို့ရဲ့ flux space angle feed forward နဲ့ flux magnitude signals တို့ကို၊ flux command နဲ့ torque command တို့အတွက်၊ ပထမဆုံး တိုင်းတာယူပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ slip frequency အလိုက်ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ slip angle ကို reference value အဖြစ်ယူကာ၊ rotor speed ရဲ့ rotor angle အလိုက်၊ deriving flux space angle အဖြစ်၊ ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းလိုက်ပြီး၊ ညှိနှိုင်းပေးသွင်းပါတယ်။ DFOC မှာတော့ flux magnitude နဲ့ feedback signal ရဲ့ angle တို့ကို၊ voltage သို့မဟုတ် current model အနေနဲ့ပေးသွင်းကာ၊ တွက်ယူပါတယ်။
Fig. Sensorless FOC Block Diagram
feedback vector control တွေမှာ၊ rotor speed ကို sensor မှတဆင့်ရယူအသုံးပြုခဲ့ရာမှ၊ sensor less FOC တွေကို အစားထိုးသုံးစွဲလာကြပါတယ်။ sensor less FOC တွေမှာ rotor ရဲ့ speed ပြောင်းလဲမှု derivation ကို၊ stator voltage နဲ့ current တို့မှ open loop estimators သို့မဟုတ် closed-loop observers အနေနဲ့ တိုင်းတာရယူပါတယ်။
vector control ကို application recap အနေနဲ့ပြန်လည်၊ သုံးသတ်ကြည့်တဲ့အခါ stator phase currents အားတိုင်းတာပြီး၊ (a,b,c) coordinate system မှ complex space vector အဖြစ်ပြောင်းလဲယူတာ၊ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ current vector ကို (α, β) coordinate system သို့ပြောင်းလဲယူခြင်းဟာ၊ speed measurement sensor မှတဆင့် rotor ရဲ့ reference frame အတွင်း၊ speed integrating အနေနဲ့ rotor position ရယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ rotor flux linkage vector ကတော့ magnetizing inductance 'Lm' နဲ့ stator current vector တို့ကို multiplying အနေနဲ့ မြှောက်ကာတွက်ယူပြီး၊ low pass filtering မှဖြတ်သန်းပြီးမှရရှိလာတဲ့ တန်ဘိုးဖြစ်ပါတယ်။ rotor flux linkage vector ဟာ rotor no - load time constant 'Lr/ Rr' ဆိုတဲ့ rotor inductance နဲ့ rotor resistance တို့ရဲ့ ratio ဖြင့်ပေါါပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
current vector ကို (d, q) coordinate system အဖြစ်ပြောင်းလဲယူတဲ့အခါ၊ stator current vector အား d-axis component အဖြစ်၊ rotor flux linkage အား control ပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုပြီး၊ တကယ်မရှိတဲ့ imaginary q-axis ကိုတော့ motor ရဲ့ torque ကို control ပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုပါတယ်။ PI controllers တွေကို current vector (d, q) coordinate system မှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ dynamic performance ရရှိစေရန် bang - bang type current control လို့ခေါါတဲ့ on–off controller တနည်းအားဖြင့် feedback controller ဖြစ်တဲ့ hysteresis controller တွေကို တတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
PI controllers တွေဟာ၊ (d, q) coordinate အတွက်၊ voltage components အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ PI controller ဆိုတာကတော့ Proportional action နဲ့ integral action တို့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ controller ဖြစ်ပြီး၊ electronic integration routine တခုမှ reset function ကိုပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ control deviation integrated time ပြီးဆုံးတာနဲ့ controller output မှတဆင့် offset ကို ဖယ်ထုတ်ပြစ်ပါတယ်။ integral action time (IAT) ဆိုတာကတော့ proportional action နဲ့ ရရှိလာတဲ့ output ဟာ၊ integral action အနေနဲ့ controller output တခုဖြစ်လာစေဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ပြီး 'decoupling' လို့လည်းခေါါပါတယ်။
controller ရဲ့ output မှာ decoupling term ကိုတိုးပေးလိုက်တဲ့အခါ၊ rapid changes အနေနဲ့ ဆက်တိုက်ပေါါပေါက်နေမယ့် speed, current နဲ့ flux linkage တွေတည်ငြိမ်သွားပြီး၊ control performance ပိုမိုကောင်းမွန်လာတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ transistor switching ကြောင့် excessively နဲ့ destabilizing control အဖြစ်ပေါါပေါက်လာမယ့် current ripple တွေကို၊ တားဆီးရန်၊ controller ရဲ့ input သို့မဟုတ် output မှာ low - pass filter တွေ၊ တတ်ဆင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ low - pass filter တွေဟာ အမြဲပြောင်းလဲနေမယ့် dynamic control system performance ကိုကျဆင်းစေတတ်ပါတယ်။ 10 kHz နဲ့အထက် high switching frequency အသုံးပြုထားတဲ့ drives တွေမှာတော့ low - pass filter အစား၊ high-performance drives ဖြစ်တဲ့ servo drives တွေကိုသာ၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။
voltage components တွေဟာ၊ (d, q) coordinate system ကို၊ (α, β) coordinate system သို့ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် (α, β) coordinate system မှ (a,b,c) coordinate system သို့၊ ပြောင်းလဲပေးနိုင်သလို၊ Pulse Width Modulation (PWM) modulator အနေနဲ့လည်း power inverter section မှာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ vector control application တွေဟာ estimation အတွက်၊ speed သို့မဟုတ် position measurement လိုအပ်ပြီး၊ references တွေပြောင်းလဲတိုင်း torque နဲ့ flux တို့ဟာ5- 10 milliseconds အတွင်း၊ reasonably fast အနေနဲ့ လျှင်မြန်စွာလိုက်ပါ ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ PI control ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ၊ overshoot ကြောင့် step response တွေလည်း၊ ဖြစ်ပေါါနိုင်ပါတယ်။
torque ဟာ motor ရဲ့ parameters တွေအပေါါမှာ မူတည်နေသလို၊ rotor temperature မြင့်တက်လာတဲ့အခါ၊ errors တွေဖြစ်ပေါါလာတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တိုတောင်းတဲ့ millisecond အတွင်း၊ control အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ရတဲ့အတွက်၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့ processor performance ကောင်းမွန်ရန်၊ လိုအပ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Reference and image credit to : Bartos, Frank J. (Sep. 1, 2004). "AC Drives Stay Vital for the 21st Century". Control Engineering (Reed Business Information)., Cleaveland, Peter (Nov. 1, 2007). "AC Adjustable Speed Drives". Control Engineering (Reed Business Information)., "Energy Regeneration". Retrieved Apr. 20, 2012., Basics of AC Drives, pp. Hardware - Part 1: slides 9-10 of 11., Bose, Bimal K. (2006). Power Electronics and Motor Drives : Advances and Trends. Amsterdam: Academic. p. 22. ISBN 978-0-12-088405-6., Bartos, Frank J. (Sep. 1, 2004). "AC Drives Stay Vital for the 21st Century". Control Engineering (Reed Business Information)., Eisenbrown, Robert E. (May 18, 2008). "AC Drives, Historical and Future Perspective of Innovation and Growth". Keynote Presentation for the 25th Anniversary of The Wisconsin Electric Machines and Power Electronics Consortium (WEMPEC). University of Wisconsin, Madison, WI, USA: WEMPEC. pp. 6–10., Horowitz, Paul; Winfield Hill (1989). The Art of Electronics. Cambridge University Press. ISBN 0-521-37095-7., Bose, Bimal K. (2006). Power Electronics and Motor Drives : Advances and Trends. Amsterdam: Academic. p. 126. ISBN 978-0-12-088405-6., Leonhard, W.: Control of Electrical Drives. 2nd Ed. Springer 1996, 420 pages. ISBN 3-540-59380-2., Zambada, Jorge (Nov. 8, 2007). "Field-oriented control for motors". MachineDesign.com., Yano, Masao et al. "History of Power Electronics for Motor Drives in Japan". p. 6, Fig 13. Retrieved 18 April 2012.,http://what-when-how.com/, http://www.sciencedirect.com/, http://www.marine-electricity.com/, http://www.mosaic-industries.com/,
Posted by ကိုထွန်း at 17:07